Izinhlokodolobha Zase-Asia | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | 16/07/2021 08:25 | Ukuhamba kwe-Asia
Asia iyizwekazi elinabantu abaningi futhi elikhulu kunawo wonke emhlabeni. Icebile, ihlukahlukene kubantu, izilimi, imihlaba, izinkolo. Kunamazwe ahlukile komunye nomunye njenge-Israel neJapan, Russia nePakistan noma i-India neKorea. Kepha namhlanje sizokhuluma ngokuthi iziphi, ngombono wami, ezihamba phambili Izinhloko-dolobha zase-Asia.
Ngisho amadolobha aqhamuka emazweni amaningi iTokyo, iBeijing, iTaipei, iSeoul neSingapore. Ngayinye inikela ngeyayo, inomlando wayo, isiko layo, ubuhlakani bayo. Ingabe sizitholile?
IBeijing noma iPeking iyinhloko-dolobha ye-People's Republic of China futhi iyinhlokodolobha kazwelonke enabantu abaningi kakhulu emhlabeni, cishe nayo Abantu abayizigidi ezingu-21. Kusenyakatho yezwe futhi kunezifunda eziyi-16 zasemakhaya, ezisemadolobheni nasemadolobheni.
Kuyinto inhliziyo yezwe ezingeni lezepolitiki namasiko futhi ngenxa yobukhulu bayo empeleni iyidolobha elikhulu. Ngemuva kweShanghai, idolobha lesibili elinabantu abaningi futhi ngemuva kwenguquko yokugcina yezomnotho ihlala endlunkulu yezinkampani ezibaluleke kakhulu zaseChina emhlabeni jikelele.
Futhi, eBeijing Ingelinye lamadolobha amadala kakhulu emhlabeni, aneminyaka engaphezu kwezinkulungwane ezintathu kobukhona. Kwakungeyona kuphela inhlokodolobha yombuso ezweni, kepha yayingenye yezindawo ezibaluleke kakhulu nezihlala isikhathi eside. Izungezwe amagquma futhi umlando wayo omuhle usabonakala nanamuhla amathempeli, izigodlo, amapaki, izingadi namathuna. Akunakwenzeka ukungazinaki i- Idolobha Elinqatshelwe, iSigodlo Sasehlobo, Amathuna AseMing, the Udonga Olukhulu noma i-Grand Canal.
La UNESCO umemezele izindawo eziyisikhombisa eBeijing njenge Amagugu Omhlaba (ezinye yizona esesizibalile phambilini), kodwa ngale kwalezo zindawo zobukhazikhazi umuzi uqobo, nemigwaqo yawo kanye izindawo zendabuko, ama-hutong, kuyisimanga.
Ngaphandle kwezindawo zayo zokuheha izivakashi kanye nesikhathi samanje, yiyona ihabhu ezokuthutha ezibaluleke kakhulu enyakatho yezwe. Inezitimela ezihamba ngesivinini esikhulu ukuya emadolobheni afana neShanghai, Guangzhou, Kowloon, Harbin, Inner Mongolia njalonjalo. ISiteshi Sesitimela saseBeijing savulwa ngo-1959 kepha kukhona ezinye iziteshi ezakhiwe emashumini eminyaka alandelayo, njengoba uhlelo lwesitimela lwandiswa futhi lwenziwa lwesimanje. Kukhona nomgwaqo omkhulu, onolayini abangama-23 namakhilomitha acishe abe ngu-700 ubude.
Ngaphezu kwalokho kunemigwaqo emikhulu nemigwaqo eshiya idolobha neminye engena ngaphakathi. Le migwaqo iyindilinga, ijikeleza idolobha ibheka iDolobha Elingavunyelwe njengesikhungo salo. Futhi-ke, edolobheni kunesikhumulo sezindiza samazwe omhlaba. Kuyafaneleka ukusho lokho kusuka ku-2013 Uma uvela emazweni anjengeBrazil, i-Argentina, i-European Union noma iJapan, phakathi kokunye, uvunyelwe a Ama-visa angama-72 ukuvakashela idolobha.
Kuyinto Inhlokodolobha yaseJapan, ngokwezwi nezwi lisho inhlokodolobha noma idolobha lasempumalanga, futhi liphakathi nendawo empumalanga yesiqhingi saseHonshu, esifundeni saseKanto. Ingabe yena ezombusazwe, ezenhlalo, ezemfundo, amasiko nezomnotho ezweni.
ITokyo inabantu abaseduze Abantu abayizigidi ze-40 (Izwe elifana ne-Argentina, ngokwesibonelo, linabantu abalinganiselwa ezigidini ezingama-46 futhi linabubanzi obuphindwe kayinkulungwane), ngakho-ke kunabantu abaningi endaweni encane.
Ekuqaleni kwakuyidolobhana labadobi elalibizwa nge-Edo, kepha labaluleka eNkathini Ephakathi, ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX. Ngekhulu leminyaka elilandelayo bekungumuzi okuthi ngokwabantu bawo usuvele uqhathaniswa namadolobha ase-Europe. Kwakungeyona njalo inhloko-dolobha yaseJapane, iKyoto yayihlala isikhathi eside, iNara efanayo, kodwa ngo-1868 yaba yinhloko-dolobha ngokuqinisekile.
Tokyo wazamazama umhlaba ngo-1923 bese kuba yi Amabhomu eMpi Yesibili Yomhlaba. Ushintsho olukhulu nokukhula kwalo kwaqala ngawo-50, kuhambisana nokubuyiselwa kwezwe kwezomnotho.
ITokyo ayikasweli imicimbi yezemidlalo yomhlaba wonke njengama-Olimpiki (yize ama-Olimpiki ka-2020 ezokhohlwa), futhi yize ingenayo ingcebo enkulu yokwakha esinde ekubulaweni kwabantu abaningi kangaka, iqiniso ukuthi isimanjemanje yiso esikhanga kakhulu.
Ungakhohlwa ukuvakashela i- ITokyo Tower, iTokyo Skytree, imigwaqo yaseShibuya, ubuhle beGinza, Roppongi Hills ...
Kuyinto inhlokodolobha yaseNingizimu Korea nedolobha elikhulu kunawo wonke kuleli. Inabantu cishe Abantu abayizigidi ze-20 futhi inomnotho oqinile impela. Nayi indlunkulu yezinkampani ezifana ne-LG, Samsung, Hyundai ...
USeoul unomlando onezahluko eziningana ezidabukisayo kusukela lapho amaJapan ahlasela izwe base beyinamathelisa embusweni wabo ngo-1910. Bese ithuthukiswa amazwe asentshonalanga, izakhiwo eziningana, kwabhidlizwa nezindonga, kwathi kuphela impi lapho abaseMelika befika bezowukhulula. Ngo-1945 leli dolobha labizwa ngeSeoul, yize impilo yalo yayingeke ithule ngoba ngawo-50s Impi yaseKorea.
Ngemuva kwakhe, ngemuva kwempi phakathi kwabantu baseNingizimu Korea nabaseMelika elwa namaKorea aseNyakatho namaSoviet, idolobha lahlukumezeka kakhulu. Ukucekelwa phansi kwahlanganiswa nesikhukhula sababaleki, ngakho-ke sathola inani labantu ngokushesha okukhulu. Ukukhula kwayo emadolobheni nakwezomnotho kwaqala ngawo-60. Namuhla Ama-20% abantu sebonke bahlala lapha kusuka eNingizimu Korea.
Idolobha elinobusika obubandayo namakhaza atshisa kakhulu. Ihlukaniswe yaba ngama-25 gu, izifunda, ezinobukhulu obuhlukile. Enye yiGangnam edumile esiyizwe kulowo pop waseKorea eminyakeni embalwa edlule. I-Seoul ibe inesibalo sabantu esiphindwe kabili kunesaseNew York.
Inezindawo zomlando okufanele zivakashelwe, umkhakha ophakathi kweSouth Korea neNyakatho Korea, iZindawo ezidumile eziDemiliwe, iminyuziyamu, izakhiwo zendabuko, izindawo ezinhle kakhulu nezimpilo eziningi zasebusuku.
Yizwe futhi ngasikhathi sinye inhloko-dolobha. Kuyisifundazwe esiyisiqhingi, idolobha eliseNingizimu-mpumalanga ye-Asia. Kuyisiqhingi esikhulu futhi sineziqhingana ezingama-63 noma iziqhingi ezincane ngakho-ke zengeza phezulu.
Abantu abaningi bahlala lapha futhi kuyindawo yamasiko amaningi eye izilimi ezine ezisemthethweni: IsiMalay, isiNgisi, isiMandarin isiShayina nesiTamil. ISingapore yanamuhla yasungulwa ngo-1819, njengengxenye yezentengiselwano yoMbuso WaseBrithani wangaleso sikhathi. EMpini Yezwe II kwakuhlalwa amaJapan, yabe isibuyela ekulawuleni isiNgisi ekugcineni uthole ukuzilawula kwakhe ngo-1959, enkambisweni yokweqa umbuso wase-Asia ngemuva kwempi.
Yize kunamaphuzu ayo amabi, ukuntuleka komhlaba, izinsiza zemvelo, yaba ngenye ye Amahlosi amane ase-Asia ngakho-ke yathuthuka ngejubane elincane. Uhlelo lwayo lukahulumeni luyiphalamende elingahambelani futhi uhulumeni ulawula yonke into kakhulu. Iqembu elilodwa selinqume ikusasa leSingapore ingunaphakade.
Vele, ngumphakathi olondolozayo kakhulu. Ubulili bobulili obufanayo abukho emthethweni, Okungenani okwamanje. Kukhona nabosozigidi abaningi, izinga eliphansi lokungasebenzi futhi isikhathi esithile manje sekukhona nezokuvakasha eziningi. Empeleni, leli dolobha lidolobha lesihlanu elivakashelwa kakhulu emhlabeni bese kuthi eyesibili ibe sesifundeni i-Asia Pacific.
Kuyinto inhlokodolobha yaseTaiwan noma iRiphabhlikhi yaseChina. Kusenyakatho yesiqhingi futhi ine- inani labantu ababalelwa ezigidini ezimbili noma ngaphezulu, kubalwa indawo yedolobha elikhulu. Eqinisweni, igama lisho konke lokhu.
Ngokusobala, yi inhliziyo yezepolitiki, yezomnotho namasiko ezwe futhi elinye lamadolobha abaluleke kakhulu e-Asia. Konke kudlula eTaipei nasezikhumulweni zezindiza nezinhlelo zayo zesitimela. Ngaphezu kwalokho, inezakhiwo eziningi ezithandwayo, ezaziwa njengezokwakha noma amasiko, njengesakhiwo esidumile saseTaipei 101 noma iSikhumbuzo seChiang Kai-shek.
Kodwa futhi ITaipei inezimakethe, ineminyuziyamu, imigwaqo, izikwele, amapaki. Futhi umlando, kunjalo. Bekulokhu kuhlobene neChina, empeleni namhlanje iPeople's Republic of China iyaqhubeka nokusho ukuthi lesi siqhingi singesaso, kodwa futhi kwakuhlalwa amaJapan ngo-1895. Ngemuva kokuphela kweMpi Yesibili Yomhlaba, iChina yabuyela ukuyilawula, kepha ngemuva kwempi yombango yaseChina lapho amakhomanisi anqoba khona, abezwe labo kwadingeka basuke ezweni bangene eTaiwan.
We bafowethu ube nokugumbuqelwa kombuso kanye nobushiqela kanye nezinkinga zomnotho lokho kwaphoqa izakhamuzi zakhona ukuba zibalekele kwezinye izindawo. Okubi kakhulu ngeminyaka yama-90s kwaqala enye inkathi yezepolitiki futhi kusukela ngo-1996 kunamaqembu amaningi nokhetho lukazwelonke.
ITaipei ine- Isimo sezulu esishisayo ngakho-ke kungcono ukubalekela ihlobo elingabekezeleleki. Izungezwe izintaba futhi inemifula kanye nezokuvakasha ikakhulukazi ezivakashela i- Chiang Kai- Shek Memorial, eyasungula iTaiwan ngemuva kokulahlekelwa yimpi yombango, iNational Concert Hall, inkundla yezemidlalo kazwelonke, amathempeli ayo ahlukahlukene, nemikhosi yamasiko, iFreedom Square, iNational Museum, endala kunazo zonke ezweni futhi eyasungulwa amaJapane ...
ITaipei 101 yindawo ephakeme kakhulu eTaipei. Yavulwa ngonyaka we-2004 futhi yayiyinde kunazo zonke emhlabeni isikhathi esithile kuze kube yilapho kwakhiwa iBurj Khalifa. Ngabe Ukuphakama okungamamitha ayi-509 futhi ukuphela konyaka iziqhumane ziwumbukwane impela.
Ngikhethe lezi kunamanye amadolobha amakhulu ase-Asia ngoba yingxenye yaleli zwekazi engiyithanda kakhulu. Akukho okufana nokuhamba lapha uzizwe ukude namasiko ethu nezinkolelo zethu. Futhi njengoba besho, ukungazi kuyelapheka ngokufunda kanti ukucwasa ngokobuhlanga kuyelapheka ngokuhamba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » Izinhloko-dolobha zase-Asia